Jumma Mubarak - Konke odinga ukukwazi mayelana ngoLwesihlanu 2018
Jumma Mubarak leli gama lapho amaSulumane isebenzisa emhlabeni wonke ukubingelela abalandeli bawo abangamaSulumane ku kwezinsuku eziyisithupha ngesonto ngokuthi “ULwesihlanu”.
ULwesihlanu (Jumma Mubarak) kuyinto usuku ebalulekile inkolo yamaSulumane kanye has oda ekhethekile yi Allah (Nkulunkulu). Kunezizathu ezimbili eziholela kulesi; AmaSulumane umthandazo ngoLwesihlanu noma Jumma umthandazo ucingo masonto onke futhi yesibili ngokuvumelana umlando Islamic, sekube izenzakalo eziningi ezibalulekile abantu abaye kwenzeka ngalolu suku.
Jumma Mubarakah – usuku olubusisekile Of Jumma
jumma Mubarak incazelo
Kuyini Jummah umthandazo?
Jum'ah: Ukubaluleka Of ngoLwesihlanu futhi Jumma umthandazo
Ingabe ngoLwesihlanu usuku olungcwele amaSulumane?
Izinzuzo ngosuku Juma
Jumma Mubarak ezimbili definition
ukubaluleka Jumma Mubarak
Ngokwemfundiso yeSonto Prophet Muhammad (PBUH), Jumma kuyinto usuku olubusisekile. Ukugubha izibusiso Juma, AmaSulumane bayakhonza ngalolu suku.
Amazwe e Middles futhi babe iholide yabo yamasonto onke ngoLwesihlanu esikhundleni ngeSonto ukuze amaSulumane ongenza umthandazo Jumma kule mosque futhi bachitha isikhathi sabo nomndeni. Ukuyibiza usuku injabulo ngeke okungalungile.
Jumma kuyinto izwi Arabhu okusho “ULwesihlanu”. Nakuba Jumma kuyinto Arabic ulimi izwi kodwa amaSulumane emhlabeni wonke isebenzisa elithi okufanayo NgoLwesihlanu, Akunandaba ukuthi yiluphi ulimi ezilandelayo.
Lokhu kungenxa yokuthi we ngoLwesihlanu yomkhokhi imaphi amagama kuyinto “Jumma Nomthandazo”. Ngokwezwi nezwi lisho ngoLwesihlanu ngolimi lwesiNgisi yilona ibandla.
Njengoba kushiwo ngenhla, Jumma kuyinto usuku ebalulekile Islam ngenxa izenzakalo zomlando kanye umthandazo ekhethekile. Lomthandazo ekhethekile libizwa Jummah umthandazo.
Lomthandazo iye ahlinzekwa njalo ngoLwesihlanu esikhundleni umthandazo 2nd (Zuhr umthandazo) ntambama e-mosque. I isikhathi Jumma umthandazo kungaba ezahlukene mosque ngamunye okuyinto incike lonke uhlelo amathempeli kodwa ngokuvamile kwenzeka ngesikhathi Zuhur umthandazo. Prophet Muhammad (PBUH) wathi:
"Ngosuku best emehlweni kaNkulunkulu uLwesihlanu, usuku ibandla "
The Quran futhi ukhuthaze amaSulumane ukuvakashela amathempeli ngoba umthandazo Friday:
"O you kholwa! Uma ucingo yomthandazo liyashunyayelwa ngoLwesihlanu khawuleza ngenkuthalo ukukhunjulwa uNkulunkulu futhi ushiye eceleni ibhizinisi. Lokho kuhamba phambili uma kodwa wayazi." (Quran 62:9)
Jumma umthandazo ubalulekile futhi amaSulumane ngoba ngokungafani neningi lezinye imithandazo usuku, akukho Azaan kuphela (Call for umthandazo) futhi Salah kodwa futhi Imaams amathempeli ukuletha Khutbah ekhethekile (inkulumo) ngaphambi umthandazo Jummah
NgoLwesihlanu umthandazo Islam akuqedwanga ngaphandle le inkulumo sithunyelwe ngolimi Arabhu kuphela.
Ngo majorities abaningi emazweni amaSulumane, lo Imaam amathempeli liphinde sinikeza inkulumo ngolimi lwabo ezihlobene Islam.
Injongo yale nkulumo iwukuba uyazi amaSulumane ngemfundiso omkhulu Prophet Muhammad (PBUH) futhi ukukhumbuza yakhe umhlatshelo Islam.
Lolusiko akuyona ovamile kakhulu kuwo wonke amazwe amaSulumane kodwa amazwe afana Pakistan, India, Bangladesh, Egypt futhi Saudi Arabia ukwenza landela lesi.
ULwesihlanu kubhekwa usuku olungcwele amaSulumane ngoba sibalulekile futhi imiyalezo lapho zinikelwe umProfethi Muhammad (PBUH) ngoba lolu suku ukutshela ukubaluleka kwayo.
Lolu suku engakaze nje ngababusisiwe kodwa futhi njengoba i-Eid ngosuku (ngosuku lokugubha) umProfethi Muhammad (PBUH). Kodwa lokho izizathu hhayi kuphela ngokubiza ngoLwesihlanu njengoba ongcwele.
Kukhona izenzakalo eziningi ezibalulekile zenzeka ngalolu suku ngenxa okuyinto amaSulumane ushayele Jummah usuku (Jumu'ah)njengoba usuku olungcwele. Lezi zenzakalo zihlanganisa izenzakalo ezifana:
Allah wadala u-Adamu ngoLwesihlanu nabanye futhi wathumela kuJehowashi lakhe Umhlaba. Ngokusho kwezazi Islamic, liphinde sosukwini lokufa kwakhe
Ngokwemfundiso yeSonto Islamic, bekulokhu ihora lapho zonke imithandazo yomuntu sesamukelwe Allah
Jumma liye labizwa ngokuthi njengoba usuku master lweviki ngendlela efanayo Ramadan liye labizwa ngokuthi inkosi izinyanga zonke
Izazi Islamic zithi ku ihora lesi usuku ngalunye, izinkulungwane imiphefumulo akhululwé hellfire
Ngokusho Ibn Majah, lolu suku uye wabizwa ngokuthi njengoba unina izinsuku lapho Tirmidhi uthi abantu abayinani elingavamile bafa ngalolu suku uyakusindiswa ekuhlunguphazweni ngebanga ithuna
Uqondeni ngu Jumma Mubarak?
Umsebenzi Mubarak noma Mabrouk kuyinto Arabic ulimi emhlabeni okusho ubusiswa noma siyakuhalalisela. Ezweni Muslim, leli gama liye lasetshenziswa ukuze kubhekiselwe ukuhalalisela umcimbi noma usuku amanye amaSulumane.
juma Mubarak english
jumma Mubarak okusho english
jumma Mubarak e arabic
Ngakho, uma ezwa ukuthi Muslim uthi Jumma Mubarak noma Jumma Marouk komunye umlandeli, lokhu kusho ukuthi ekubingeleleni izibusiso zale usuku olukhethekile ukuze nomunye. Nakuba kokubili Mubarak futhi Mabrouk amagama Arabhu kodwa emazweni non-Arabic Muslim,
AmaSulumane bakhetha ukusebenzisa leli gama ukubingelela izibusiso ngoLwesihlanu komunye nomunye kunokuba usebenzise izwi ngezilimi zazo wendawo noma kazwelonke afana Urdu, Hindi, isiZulu, futhi Turkish njll.
Abanye abantu futhi ukhethe ukusebenzisa ezinye amazwi ahlobene ukubingelela izibusiso ngoLwesihlanu. La mazwi ahlanganisa ujabule Jummah, ujabule Jumma, ujabule Jumma Mubarak 2018, Juma Kareem nangoLwesihlanu Mubarak njll.
Akukho dua ngokuba Jumma Mubarak okuyinto Kuye kwatholakala Quran Hadees. Lokhu kusho ukuthi ngeke ukuba qinisekisa ukuthi dua abathile kuphela kodwa ongawuthandaza yini ukulingana isidingo sakho.
Uma i-Google "Jumma Mubarak amabili" ngeke wathola izinkulungwane ezahlukene Jumma Mubarak dua ngezilimi ezahlukene.
Ungaya nanoma iyiphi kuzo lapho uthanda kakhulu kunokuba nje ngokwakho nomunye ethize Jumma Mubarak ezimbili, le Jumma Mubarak ezimbili iye yasetshenziswa amaSulumane ukubingelela ngokusebenzisa intanethi njenge Whatsapp, Facebook, kanye ne-Twitter ngisho nge-SMS njll .
Ungenza Jumma Mubarak dua nganoma iyiphi indlela ethize kuhlanganise okwakuthi ngemva komthandazo asemthethweni ULwesihlanu 2018 e mosque. Amanye amathempeli emhlabeni ngokukhethekile ukuhlela for the Jumma ezimbili lapho zithandazela lonke humanity ngqo amaSulumane.
Jumma Mubarak 2018: ukubaluleka, ezimbili, Izibusiso, ः ades, futhi Quran https://jummamubarak.info
Thola ulwazi mayelana Jumma Mubarak kuhlanganise ukubaluleka Jummah, ezimbili, Hdes, namavesi Quran
Jumma Mubarak Kuhle Umbhalo 2018 U-downloader mahhala
Disemba 21, 2017 Awekho amazwana
Februwari 3, 2018 Awekho amazwana